ဤသည်ကားဒုစရိုက်ဖြစ်၏ | Apg29
568 online! | Sidvisningar idag: 58 446 | Igår: 171 555 |
ယနေ့ညဥ့်ရဲ့ midsummer ပွဲကျင်းပနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာတွေကတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါမနေ့ကဒီအက high-profile ကိုဆောင်းပါးထဲမှာ Midsummer ပွဲကျင်းပနှင့် ပတ်သက်. wrote:
သငျသညျ midsummer အတွက်လိင်တံပတ်ပတ်လည်ကခုန်?
တစ်ဦးအသိအကျွမ်းလူတိုင်း hungover နှင့်မောင်းထုတ်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Liseberg သှားဖို့တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံးအနေ့, ယနေ့ပင်ကြောင်းပြောပြတယ်။
svenska Dagbladet အကွောငျးရေးသားခဲ့သည်ဆွီဒင်နိုင်ငံသား '' အဆိုးဆုံး midsummer အပြစ်များ။ ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးအပြစ်၌မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညျယရှေု။
ယောဟန် 16: 9
အပြစ်ဖြေရာအကွောငျး, (ယေရှု) သူတို့ငါ့ကိုမယုံကြပါဘူး။ အကြောင်းမူကား,
ရလဒ်အနေနဲ့, သင်ယေရှု၌မယုံကြည်ကြဘူး, သင်တစ်ဦးကဘုရားတရားမဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နှင့်မတရားသောသူသည်ဒုစရိုက်အပြစ်လုပ်ပါ။
သို့သော်သင်သည်, နောင်တရသညျယရှေုခရစျသလက်ခံရန်လျှင်, သင်အလိုအလြောကျဖြောင့်မတ်ကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြသည်။
အမျိုးမျိုးသောအပြစ်များ, ယစ်မူးခြင်း, တိုက်ပွဲတွေလည်း, အယူမှားဝါဒနှင့်ရုပ်တုကိုးကွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ထိုအခါလာမည့်နှစ်တွင်ရဲ့ midsummer အစီရင်ခံစာအတွက်စာတမ်းများလျော့နည်း!
by Holger Nilsson 1980 ခုနှစ်တွင်ကျနော်တို့ကပိုရှိသည်နှင့်ပိုပြီးဟူသောဝေါဟာရကို "ဟု New ခေတ်" ကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ သို့တိုင်ဒါသို့သော်များစွာသောသစ်ခေတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းသန်းနဲ့ချီတဲ့, ထိမိထိခိုက်ခြင်းနှင့်ယခုရှေ့ဆက်လောကထဲကလူတော်တော်များများသည်ဤလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ်ခုခုသည်အဘယ်အရာအားဖြင့်စဉ်းစားရခက်။ ဥပမာအားဖြင့်, နှစ်ကုန် 1986-87, နှစ်သစ်ကူးအကြိုမှာ, ကဘာဝနာသို့သှားသောလူများ, လက်ခံထားတဲ့အစွဲများနှင့်ရိုးရာဓလေ့ပြုမူသောအမှုသန်းပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်ပျက်မတိုက်ဆိုင်မှုခဲ့ပေမယ့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက New Age ကလူတစ်ဦးညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
image: Open ကိုတံခါးပေါက်။
အဖိနှိပ်ခံခရစ်ယာန်များ၏ပွင့်လင်းတံခါးပေါက် '' နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စာရင်း 2019 ကာလအစဉ်အမြဲအဆိုးဆုံးတစ်နှစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဒါဟာဝေးနေဖြင့်မှတ်တမ်းများစတင်ကတည်းကအခက်ခဲဆုံးတစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် ဒါဝိဒ်သည်Billström ယရှေုသညျယုံကြည်သူများမဟုတ်သောလူများအထဲကရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယရှေုသညျမွကွေီးပျေါမှာလမ်းလျှောက်သောအခါသူအထံတော်သို့လာသောလူအများတွင်ပေါ်မယ့်အရာကိုသိသည်။ သူဟာဒီနေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
Photo: SVT ။
တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေရော်နယ်အောင်နိုင်မက်ဒေါ်နယ်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ Janie Leinonen "အနုပညာ" McJesus ဆန့်ကျင်သည်ဣသရေလအမျိုး၌ဆန္ဒပြမှုများ။
အဆိုပါ undesired - အပိုင်း 17
အခုတော့ကျွန်မရဲ့လှုပ်နှင့်အတူဆက်လက်နှင့်ငါ့ကလေးဘဝထဲကနေအမှတ်စဉ်တန်ဖိုးထား။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုပြင်းထန်မှုအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပို. ပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ဆုတ်ထားတာအပိုင်းယခုမတိုင်မီတည်ရှိသည်။
တစ်ဦးကတိတ်ဆိတ်သညျယရှေု - ညျဘုရားသခငျ၏စ
ပညာရှင် Hans Jansson, Uppsala ဟေရုဒ်အန္တိပုသမ္မာကျမ်းစာဇာတ်လမ်းမှာထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်း။ ဤအချိန်သူသညျယရှေုမတိုင်မီဆိုလိုတာပါ။ ထို့နောက်နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းဖြတ်ပြီးကတည်းကသုံးနှစ်ကခဲ့သညျ။
ဘေးဥပဒ်ကိုစာရင်း - ညျဘုရားသခငျ၏စကားသံကိ
by ပညာရှင် Hans Jansson , Uppsala "လိမ္မာပါးနပ်" နှင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြနေသောအခြေအနေတွင်ဟေရုဒ်မင်း၏လုပ်ရပ်များ၏ဘေးဥပဒ်တစ်ခုခုရှိပါသည်။ အဲဒီကမ်ဘာဦးကမျြးစာ၌တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်အရာကိုမှငါ့ကိုမစသေညျ။
1800 ကနေရှေးအနာဂတ္တိနောက်ဆုံးသောကာလ၌ဆွီဒင်ကိုတောင်ပေါ်တက်ပြသရန်ယေရှုအကြောင်းစကားပြော, ပြီးတော့အားလုံးကြည့်ဖို့အတှကျတောငျပျေါမှာ!
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ယခုသူမကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှအခွန်ဆက်ရချေဘယ်မှာ program တစ်ခု Netflix နဲ့လေတပ်ခဲ့နှင့်စကားများအားဖြင့်ကောက်ချက်ချ: "ဘုရားသခင့ကိုယ်ဝန်ဖျက်နှင့်အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကောင်းကြီးပေးတော်မူ" နဲ့မနာသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ကခုန်တတ်ကြ၏။
သငျသညျငရဲကိုသွားလျှင်သင်ညှဉ်းဆဲ။ အဲဒီငရဲအဘို့ဖြစ်၏ယျ။ ရုံလုကာ 16 အတွင်းသူဌေးအဖြစ်ကိုသင်မီးတောက်ထဲမှာညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ လူအားလုံးတို့သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုငရဲသို့သွားရ, သူတို့ညှဉ်းဆဲခံရဖို့ရှိပါတယ်သွားပါ။
မွေးကင်းစကလေးများ၏ပြီးသားတစ်ဦး '' ဟောင်
Photo: Facebook ကထဲကနေ Screenshot ။
Louise Nelum စန္ဒာမာလီ "Louis" သဲ, 26, ယခုကျား dysphoria များအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့လက်ပစ်ဘောကစားခြင်းရပ်သူတစ်ဦးဆွီဒင်လက်ပစ်ဘောလုံးကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Christian Bale: စာတနျသလှုံ့ဆော်မှုကျေးဇူးတင်ပါသည်
Reader ကိုမေးလ်: Pelle Lindberg
ရုပ်ပုံ: TV4 မှစ. ။
စာတနျက: အကောင်းဆုံးအမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆုများအတွက်စျေးနှုန်းသည်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူရုပ်ရှင်ဒုအတွက်သရုပ်ဆောင် Christian Bale ထံသို့သွားလေ၏။
ဆွီဒင်နှင့် ပတ်သက်. အမေရိကသတင်းများ: ဆွီƛ
စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်၌, သေးငယ်တဲ့ Microsystems ကိုအတူဆိုင်ကိုရွေးချယ်ဖို့ 1000 ရဲ့ရွေးချယ်ပါ။ သူတို့ရဲ့အသားအရေအောက်မှာထဲထညျ့ chips ။
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် Stefan Eliasson ဤနည်းကလုပ်ရပ်တွေရဲ့အပြစ်လွှတ်။ Louisa နှင့် Maren, ထူးခြားတဲ့မဟုတ်မကြာသေးမီကလစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ 34 ခေါင်းဖြတ်သတ်ခရစ်ယာန်တွေကိုအတူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သင်္ချိုင်းတွင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
by Holger Nilsson တရုတ်အတွက်အဖြစ်မှန်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးသွင်းကြဘူးနိုင်ပါတယ်ယခုရှိပါသည် - ကဖြစ်ကောင်းဘယ်သူမှစိတ်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
Vecka 04, måndag 21 januari 2019 kl. 08:17
ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းတရား - Christer Åberg
သူကငါ့ကိုဆောင်သွားပြီးမှ, ငါရပ်နှင့် Donald အမည်ရှိဝင်ပေါက်မှာ Pentecostal ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအတွင်းခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးနှင့်ပြောဆိုသော။ ထို့နောက်သူကမေးခဲ့တယ်: "သင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ချင်ပါသလား" ငါသည်ဤငါကလည်းတစ်ခုခုဘာမသိပေမယ့် ...
လျှပ်စစ်ကားကုမ္ပဏီ၏တက်စလာတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ Elon Musk အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ် colonizing ၏အိပ်မက်မှအခြားလူများပေးပို့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံရေး - Stefan
ကမျြးစာကိုလိင်တူဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောသနည်း? ကျမ်းစာစာသားများနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအငြင်းအခုံ Stefan Gustavsson အားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောဟောပြောပွဲအတွက်အလွန်အခြေခံလမ်းအတွက် illuminated ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ယေရှုခရစ်သည်အခြားလူများအနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကဘာလဲဆိုတာသိရန်အရေးကြီးသည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့ဘယ်လို။ ကမျြးစာကိုသင်ထာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသင်တို့သိရသင့်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤသိနိုင်သနည်း
အဆိုပါမိတ်ဖက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်, သင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းအတူတူပါပဲင်ကဆိုသည်။ သို့သော်ဤကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီသည်မဟုတ်။
သငျသညျကမျြးစာကိုတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းအများကြီးပြောတတ်သည်ကိုသင်တို့သိသလား? ဤတွင်ကျွန်မကျမ်းစာထဲတွင်တိရိစ်ဆာနျမြားနှငျ့သမ်မာကမျြးကိုးကားနှင့်အတူအချို့သောအင်းဆက်ပိုးမွှားအများအပြား၏ရှည်လျားသောစာရင်းရှိသည်! ပျော်မွေ့ပါ
၏ Sigvard ဓား ငါ၏အမျှော်လင့်ပရောဖက်ပြုအရေးအသားဤသည်၌, ငါဖော်ပြထားတာနောက်ခံ, ယခင်ရာစုအရွယ်ဖြစ်ရပ်များတစ်ခု afterimage အဖြစ် "ဟုအဆိုပါåtervunne / ပျောက်ဆုံးသား" (လုကာ 15) အကြောင်းကိုယေရှု၏ပုံဥပမာထားတော်မူ၏။
သူတို့မော်ရိုကိုအတွက်တပ်ချသည့်အခါယမ်ကနေနှစ်ဦးကလူငယ်တစ်ဆံပင်ရွှေရောင်အမျိုးသမီးတွေမွတ်စ်လင်များကခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာသင်တန်းကဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်အသုံးအနှုန်းကကိုရမ်ကျမ်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့ဘာသာရေးအရလှုံ့ဆော်အစ္စလာမ့်လူသတ်မှုကြောင်းဖြစ်သော, အကြမ်းဖက်ဝါဒပြုမူသောအမှုအမြိုးသမီးမြား၏လူသတ်မှုတောင်းဆိုထားသည်။
ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ 21 ရက်နေ့တွင်ဖွင့်ညမှာ 12 နာရီမတိုင်မီကျွန်တော့်ဇနီးသေဆုံးပြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏nyförlösteသားယောလ 22 ဒီဇင်ဘာနံနက်ယံ၌လေးယောက်အတိတ်တစ်ဝက်ကတည်းကအနိစ္စရောက်လေ၏။
ဘုရားသခငျသညျရဲ့အသံကိုသတ်သောထိုလူ - အပို
by ပညာရှင် Hans Jansson , Uppsala ဒါဟာဟေရောဒိမြျှောလလည်းဒီကခုန်ခဲ့သည်။ သူမ၏မှောင်မိုက်မကျြမှောကျ၌မီးလျှံလျှံသည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာhämndbegäretsကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူမသည်သူ၏မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်တပ်မက်အာဏာဘာမှသို့သူမ၏တွန်းနိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 651 307 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 128 bloggartiklar, 93 270 kommentarer och 61 314 bönämnen.